बिपी प्रतिष्ठान धरानको निमित्त उपकुलपतिमा डा. खनाल – Health Post Nepal
२०७६ साउन २ गते १०:३४
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निमित्त उपकूलपतिको जिम्मेवारी प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. गुरुप्रसाद खनालले पाएका छन् । उपकूलपति डा. राजकुमार रौनियार ८ लाख घुससहित अख्तियारको फन्दामा परेपछि रिक्त उपकूलपतिको जिम्मेवारी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि डा. खनालले पाएका हुन् ।
गत बुधबार प्रतिष्ठानका सहकूलपति एवं उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले खनाललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका हुन् । प्रमुख पदाधिकारीमध्ये उपकूलपतिसहित रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठमाथि पनि अर्को छुट्टै भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बन परेपछि वाँकी पदाधिकारीमध्ये बरिष्ठताको आधारमा खनालले जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
प्रतिष्ठानका लेखा प्रमुख दिनेश दाहाल, डेपुटी म्यानेजर अमित श्रीवास्तवलाई पनि अख्तियार भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएर निलम्बनमा छन् ।
उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार असार २५मा ८ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिई गएको टोलीले घुस लिइसकेको अवस्थामा उपकुलपतिको निवास धरानबाट रंगेहात नियन्त्रणमा लिएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । रौनियारले प्रतिष्ठानको भवन निर्माण ठेक्कामा कमिसनबापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएका थिए ।
अख्तियारको ऐन २०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार स्वतः पदवाट निलम्बनमा हुन्छ । त्यसको पाँच दिनपछि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानकै पूर्वउपकुलपति बलभद्रप्रसाद दास (बिपी दास)सहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको छ । जसमा बहालवाला रजिष्ट्रार श्रेष्ठसहित लेखाका प्रमुख र उपप्रमुखसमेत परेका थिए ।
उनीहरुविरुद्ध कर्मचारी तथा सप्लायरको मिलेमतोमा उपकरण तथा सेवा खरिदमा १६ करोड १० लाख ६७ हजार ८४ रुपैयाँ १३ पैसा भ्रष्टाचार भएकाले निजहरुबाट उल्लेखित रकमबराबरको बिगो, सोहीबराबर जरिमाना असुलउपर गरी कसुरबमोजिम जेलसजायसमेत गर्न अख्तियारले आरोपपत्र दायर भएको छ ।